Xerta Ahlusunno: Xigaalada Xabashida ee Xilligan! – Bashiir M. Xersi
Date: 30 Jul 2012Author: Bashiir M. Xersi 6 Comments
Sanadkii tagay, waxaan qoray laba qormo oon u kala baxshay: “Shirka Addis Ababa iyo Shuyuukhda Ahlusunna”, qormadii xigtana waxay ahayd: “Ahlusunna: Awood aan Aragti lahayn!” sida ka muuqata, ka hadlayey Ahlusunna iyo dhaqdhaqaaqyada cusub ee ay billaabeen, ha ahaado; kan ciidan ama kan siyaasadeed. Waxaa ka soo wareegtay muddo sanad ah, qormadanna waxaan dib ugu eegaynnaa, waxa qabsoomay waxa aan qabsoomin, caqabadaha taagan iyo heerka la joogo maanta, anagoo isku dayeyna inaan hareeraha ka istaagno, hoosna u eegno arrimo badan oo dahsoon, daliilkana dulsaarno, si aan dood iyo muran u galin.
Sida aan ku caddeeyey qormooyinkii hore ayaan taanna ku xusayaa, in Ahlusunna aysan qayb ka ahayn ururro diimeedka hubaysan, sida Itixaadka hooyada Alshabaab iyo argagixisada diiniga ah. Kama mid noqon dagaalladii sokeeye, ee dalka ka dhacay, lug kuma yeelan hardankii hoggaanka dalka loogu jiray, dhiigga badanna ku daatay. Waddadii lagu yaqaannay ayey sii joogteeyeen, wardigii, tusbixii, siyaaradii, xadradii iyo xuskii, iyadoon la illoobayn xerta, xalqada iyo xersi goynta, xigmadda tasawufkana aysan ka maqnayn duruusta diiniga ah.
Maahmaah ayaa dhahaysa: “Nin Addun joogoow maxaa Aragti kuu laaban!”, si xaalku sidaa u ahaado, mar qura ayaa Ahlusunna ku biirtay saaxada siyaasadda iyo silica Soomaalida, dad badan waxay rumaysan yihiin in Ahlusunna ka fursan wayday inay qoriga qaadato, ka dib markii qabuuro faagid aan loogu simine, loogu daray in Masaajidda lagu ugaarsado, middan oo ka caraysiisay Ahlusunna, kuna kaliftay inay kalkooda qoriga degta saartaan.
Abaabulkii hore, wuxuu ku billawday iskaashi dhexmaray beelaha degaanka iyo xerta Ahlusunna, ka dib waxay gaashaan buursi la galeen Xabashi, oo ugu deeqday hub iyo saanad ciidan, intaa kaliya ma ehee, waxay u tababaraan maleeshiyaad, dabcan ibahaysigu wuxuu ku salaysnaa: “Cadawgaaga Cadawgiisu waa Saaxiibkaa!” oo Ahlusunna iyo Xabashi waxaa mideeyey, oo cadaw u wada ah Alshabaab. Hubaal in wax walba aad u kaashanayso cadawgaaga, Shaydaanba Allaha ka dhigee, balse, taageerada Xabashida fattuuro ayaa wehlisee, yaa bixinaya fattuuradaa?
Isbahaysigaa dhexmaray Ahlusunna iyo Xabashida, wuxuu gaaray meel fiican, waxaa ka dhashay is aaminaad iyo kalsooni ballaran, gaar ahaan dhanka Ahlusunna, waxaadba mooddaa “Xala dhalay!”, aan tagtada war u hayn, taaganta warkeedba daa. Laba gu’ ka hor Xabashi waxay Soomaali ka fashay umaba qorna, inay ku xisaabtamaan ama maanka ku hayaan warkeed daa! Taa oo taagan ayey shir u aadeen Addis Ababa, ay kala qaybgalayeen dawladda Shariif, noqotayna filan waa iyo dhacdooyinka xanuunka reebay, dadnima xumadana muujisayey .
Awood qaybsiga siyaasadeed ee dhexmaray dawladda iyo Ahlusunna kana dhacay Addis Ababa, wuxuu ahaa albaabka Ahlusunna ka soo galeen xarigjiidka Soomaaliya, iyagoo ka soo galay dibka Xabashida iyo xad u yeelidda Alshabaab, haddana, laguma dhaleecayn kumana mudan ceebayn, waaba iga su’aale: maxaa qabqablayaasha wax looga sheegi jiray, loogana dhigi jiray Shayaadiin geeso leh, tilmaamtaa oo kale wadaaddada Ahlusunna maxaa loo siin waayey?.
Ahlusunna dagaallada xooggan ee ay la galeen Alshabaab inta badan waxay ka dheceen Gobollada Dhexe, inta badan ayaga ayaa ku gacan sarrayey dagaalladaa, kana soo hoyn jiray guulo waaweyn, haddana, gulufkooda colaadeed wuxuu noqday natiijo la’aan, maxaa yeelay, waxay garab mareen hannaanka maamulaynta. Micnaha gulufka colaadeed lama socon qorshe maamul, oo deegaannada hoos yimaada nidaam iyo kala dambayni kama jirto. Waa jaantaa rogan iyo fawdo baahsan. Dhankan waxaa uga fiican Alshabaab, haba qaldanaadaan, haba qalloocnaadaan, haba xumaadaan, haba qallafsanaadaan, haddana, waxaa jira; maamul degmo, malleeeshiyo ammaanka sugta iyo guddi maxkameed! Ujeedka ma ahan taageero Alshabaab, ee waa isbarbardhigid Ahlusunna iyo Alshabab dhanka maamulka ah.
Su’aashaas waxaan uga dan leeyahay, inaan arrin yar ku muujiyo, aanse ku hormaro: Ahlusunna miyey joogin gobollada kale ee dalka? Miyeysan joogin caasimadda Muqdisho? Maxaa looga waayey wax dhaqdhaqaaq ah, oo ay ka sameeyaan gobollada kale? Maxay wax uga qaban la’yihiin meelaha duminta joogtada ah lagu hayo? Maxay uga hortagi la’yihiin meelaha qubuuro faagiddu ka noqotay shaqo maalmeedka? Su’aalahaas iyo kuwo kale oo badan, ayaa maanka ku soo dhacaya, marka aad si qoto leh u eegto waxa ka dhacaya deegaannadaa.
Waxaa lagu doodi karaa deegaannadaa dadka deggan lama dhihi karo hal qabiil, waa beelo isku milan ood-wadaagna ah, markuu dagaal ka dhex dhaco mooyee inta kale isku mawqif ah, markase dagaal ka dhex dhoco waa isku shiilmaan ama isku gamaaraan! Sheekadu sidaa ma ahan, runta aan ka abbaarno arrinta, Dhuusa mareebna waa laga sifeeyey, Xamarna waa u fasaxan yihiin Alshabaab farbaa ku godan. Mid ahaan waa tallaabo geesinnimo iyo ragannimo leh, waa midda ah inaan laga helayn Alshabaab Dhuusa mareeb, balse, Ahlusunnada Dhuusa mareeb, maxay uga duwan yihiin kuwa Xamar? Bal taas ii jilciya Soomaalaay. Meesha kala duwaanaansho ma taalle waxaa yaal garabgal beeleed iyo gaabsi beeleed, oo ka kala jira labada degmo.
La yaab! Norwegianka iyo ururrada kale way ku soo dhawaynayeene, maxay xubnaha dawladda ugu diidayaan imaatinka deegannadaa? Mise wafdiyadaa kaash ayey wataan, oo lagu soo dhawaynayaa? Dawladduse waa jeeb tarraq, oo iyada ayaa u baahan martigalin iyo maamuus intaba? Hadday sidaa tahay waxay kuu caddayn sida loo wada noqday Cabdi Diinaar! Teeda kale, wax la’aanta miyaa la isku nacayaa? Walaalkaase intaad iska fogayso miyaad soo dhawaysanee shisheeye? Dhaqan ahaan iyo diin ahaan martigalinta iyo sooridda wanaagsani, saw ma ahayn, tilmaam aan muran ku jirin? Wadaaddada maxaa qaaday?
Sida markii hore Ahlusunna u seegtay subta suuban, markay Addis Ababa shirka awood qaybsi uga qaybgaleen, ayey mar kale dawgii u seegeen, si ay u xalliyaan khilaaf dhexdooda ah ayey Xabashi marti u noqdeen. Tii hore haddii qiil loo yeelo, oo la yiraa goobjoogayaal ayey u baahnayd, tan maxaa lagu macnayn, qiil nooce ah ayaase loo yeelayaa? Laga yaabee, in khilaafka Xabashidu abuurtay, iyadoo dhaqangalinaysa: “Qaybi oo Xukun!”, marba qayb si ay dhagta wax ugu sheegto, Ahlusunnase si khilaafka loo xalliyo, ma raacin hannaanka Diineed ee Shuurada, mana raacin hannaan demoqraadiga , oo labaduba ku wada arooraya in khilaafka gudaha ururka lagu xalliyo, u tanaasulidda danta guudna furaha xalka ahaato.
Mawliidku sanadkan wuxuu ku soo beegmay xilli khilaaf xun u dhexeeyo Ahlusunna, taas oo aad u haraysay qabanqaabada loogu jiro mawliidka, waxaana la dareemayaa hoos u dhac weyn, oo ku yimid abaabulka Mawliidka, maxaa yeelay, iyaga ayaaba iska dhammaan la’e, maxay ku hawlanaadaan inay xus Nabi xasuustaan? Arrintan oo dad badan u arkeen dhacdo ugub ku ah dhaqanka culimada dariiqada, taa kaliya ma ehee, waxay ku tilmaameen waddadii qallooca iyo qaabxumida, iyagoo is weydinaya: maxay ku kala duwan yihiin Alshabab iyo Ahlusunna markaa?
Ahlusunna waxaa looga fadhaa inay wax badan kala caddeeyaan, waa hadday xertii hore yihiin, haddiise ay ku biireen isrogrogga iyo qaalmorogadk,a waxba loogama fadhiyo. Waxay sameeyaan dadkaa fasiranaya, illeen iyagabu waa awoodi waayeen inay shraraxaad ka baxshaane. Taas waxaan uga jeedaa inay dadka ka qanciyaan, waxa ku kallifay shirkii Addis Ababa, jawaabta waynse waxaa u baahan kan dambee ka dhacay isna Itoobiya, ee lagu dhexdhexaadinayey isla xubanaha Ahlusunna, isku maandhafay dawladda aan la shaqaynno iyo la shaqayn maynno. Soomaalaay ma ila yaabteen?
Ugu dambayn, Ahlusunna haddii ay xal u aragtay qori ayaad sidataaye ku gorgortan, waa ayaan darro. Haddii ay xal u aragtay maanta ayaad ku duljoogtaaye ka mira dhali, iyana waa ayaan darro. In xiriirkooda dibadda ay ka billaabaan Itoobiyana waa ayaan darro kale, waxaase Soomaalaay la yaab ah, sida xaal isu badalay, ninkii awood leh kaliya wax loogu oggol yahay, culimo iyo caammaba looga siman yahay, sidii awoodda wax loogu muquunin lahaa. Shrika Addis ilama ahan inuu ka duwanaa wixii shir dhacay, waqtigiisa ha qaato, ragga joogayna waxooda ha qaataan, marka waqtiguse dhammado, wixii la kala qaatayna dhammaadaan ayaan arki doonna waxa xiyaga!
Previous Previous post: Qalalaasaha Libya: Qaddafi ama Qaranka
Next Next post: Waqti kordhisashada Baarlamaanka: Waalida Wadarta.
6 thoughts on “Xerta Ahlusunno: Xigaalada Xabashida ee Xilligan!”